Nololgelinta Daryeelka Caafimaadka Hooyada ee Gobolka Soomaalida, Itoobiya: - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Waxaa ka sheekeyneysa Mali Ebrahimi oo ah Umuliso MSF ka tirsan
“Markii aan ilmihii koowaad aan naftiisa ku badbaadiyey Wardheer waa mid aan weligey xusuusnaan doono”… waxaa ka sheekeyneysa Mali Ebrahimi, oo ah umuliso MSF ka tirsan oo dhowaan ku soo noqotey Yurub ka dib markii ay ka soo shaqeysey magaalada Wardheer, Itoobiya. Magaalada, oo ku taalla soonka ugu weyn ee rabshaddu ay saameysey ee Gobolka Soomaalida, waxa ay ku fadhidaa dhul qalalan oo geedo gaab ah oo ay ku firirsan yihiin degsiimooyin yaryar, aad u fog oo reer-guuraagu degaan.
Médecins Sans Frontières (MSF) waxa ay taageertaa xarun Xafiiska Caafimaadka Itoobiyaan uu ku leeyahay magaalada Wardheer, oo daryeelka caafimaadka aasaasiga ah siisa dadka degaanka. Qaybta adeegyada dhalmada ka horreeya ee MSF/Xafiiska Caafimaadka, ee ay Mali ka shaqeyso, waxaa hadda ka buuxa haween halkaa ku helaya gargaar ku saabsan uurka iyo dhalidda ammaanka ah.
“Laba toddobaad oo keliya ayaa ka soo wareegatey markii aan dalka imid waxaana aan shir kula jirey shaqaalaha cusbitaalka,” ayaa ay tiri iyada oo ka sheekeyneysa. “Mid ka mid ah shaqaalaheenna caafimaadka bulshada ayaa qolka orod ku soo galey waxaana uu yiri waxaan u baahanahay gaari ambalaas ah. Markii ay haweeneydu timid iyada oo foolaneysa waa ay iska caddeyd in ay foosheedu ahayd mid cakiran oo adag. Goobtu aad ayaa ay uga duwaneyd qolka dhalidda ee casriga ah ee aan kaga shaqeyn jirey dalkeyga Norway, waxaa yaalley oo keliya adrenalin yar iyo dhuun yar oo tan afka-afka la isugu saaro ah. Ilaah mahaddiise waa ay noo shaqeysey. Sagaal bilood ka dib ayaan booqdey wiilkii markaa dhashey si aan u soo macasalaameeyo. Waxaa uu u ekaa in uu caafimaadkiisu wanaagsanaa waxaana uu caano ka nuugayey hooyadiisa.
Nolosha gobolka Soomaalidu waa mid adag, waxaana uga sii darey rabshadaha goosgooska ah ee ka dhaca. Dad badan ayaa aan haysan waxyaabaha ugu aasaasisan ee nolosha loogu baahan yahay, sida biyo iyo cunto, daryeel caafimaad, iyo waxbarasho. Soonka Wardheer, ayaa adeegyada caafimaadku ay aad ugu yar yihiin, ay rugaha caafimaadkuna yar yihiin oo xataa shaqaalaha iyo daawooyinkuna ay ku sii yar yihiin. Taasna waa sababta ay MSF halkaa uga shaqeyneyso iyada oo ay iskaashanayaan Xafiiska Caafimaadka dalka.
Ka umuliso ahaan shaqadeyda waxa ay ahayd in aan aqoonsado dhibaatooyinka la xiriira caafimaadka haweenka. Mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee aan la kulmey waxa ahayd in ay aad u yareyd fahamka laga qabo waxa la soo gudboonaada jirka haweeneyda uuna u baahan yahay xilliga uurka. Haweenka ku nool gobolka Soomaalida waxaa la guursadaa iyaga oo da’doodu ay yar tahay waxaana ay badanaaba muddo kooban gudaheed dhalaan carruur tiro badan. Waxa ay cunaan raashin liita , oo badanaaba ka kooban cuntada caadiga ah sida baasto iyo rooti, waxaana ay badanaaba qabtaan hawlo adag sida iyaga oo qoryo soo gura iyaga oo uur weyn leh. Waxaan ka welweley tiro yaraanta dadka helaya gargaar cafaimaad. Ujeeddada ugu weyn waxa ay durba noqotey sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga guud ee ku saabsan caafimaadka dadweynaha iyo in dadka ay ogaadaan adeegyada ay MSF iyo Xafiiska Caafimaadku bixiyaan.
Waxaan u tegey bulshada si aan ugala hadlo baahiyahooda. Taasi waxa ay fure u ahayd guusha aan gaarney: dhex tegidda dadka reer Wardheer iyo in laga qaybgeliyo munaaqashooyinka ku saabsan daryeelka caafimaadkooda. Annaga oo taageero xooggan ka heleny shaqaalah acusbitaalka iyo xubnaha bulshada, wax badan ayaan gaarney. Bulshada ayaa markii dambe baratey adeegyada aan bixinno iyo in ay aaminaan gargaarka aan bixinno. Dadku hadda waa ay inoo yimaadaan si ay u soo doontaan gargaar caafimaad: haweenka uurka leh ayaa inoo yimaada marka uu dhiig ka socdo ama marka ay hayso fool xiran; dad uu mas soo qaniiney ama uu soo libaax soo weerarey, ayaa inoo yimaada sida dhowaanba dhacdey; iyo dad kale oo qaba noocyada kala duwan ee baahiyaha caafimaadka guud. Tirada dadka imanaya ayaa maalin kasta sii korodha.
Mar kastaba ma fududa in wax laga qabto xaaladda. Waxaa jirtey haweeney inoo timid iyada oo ay naftu ku dabayartey, markii ay si weyn u dhiig-baxdey ka dib markii ay dhashey. Waxa ay si ba’an ugu baahneyd in dhiig lagu shubo, laakiin halkaan kama jiraan bankiyo dhiig. Taas beddelkeeda ayaa waxaa lagu khasbanaadey in la helo xubin qoyskeeda ka mid ah oo oggol in uu dhiig ugu deeqo. Ka dibna waa in la ogaadaa nooca dhiigga lana baaraa. Hawsha ayaa qaadatey dhowr saacadood. Ilaah mahaddiise markaan waa aan ku guuleysaney laba maalmood gudahoodana gabadhii bukaanka ahayd lagaheeda ayaa ay isku daategey waana ay soconeysey. Toddobaad ka dib ayaan ka saarney cusbitaalka iyaga oo ah hooyo aad u faraxsan iyo ilmaheeda.
Waxa koowaad ee ay ku wanaagsan tahay ka shaqeynta gobolka Soomaalidu waa dadka gobolka. Iyada oo qayb ka ah shaqadeyda, waxa aan si dhow ula shaqeeyey shaqaalaha xarunta caafimaadka, annaga oo wadaageyna aqoonta iyo waayo-aragnimada. Tababarradii aan bixiyey waxa ay badanaaba ku saabsanaayeen xaaladaha dhalmada ee cakiran, tusaale ahaan sida loo daryeelo haweenka miyir-daboolan ama dhiig-baxaya inta ay dhalayaan iyo ka dib marka ay dhalaanba. Ka hor inta aanan soo tegin, waa aan istaagey oo dib ayaan u eegey kooxdeyda oo si guul leh wax uga qabanaya xaalado cakiran. Markaa ayaan ogaadey in aan gaarey wixii aan u imid Itoobiya in aan ka qabto.
Waa aan hubaa in shaqaalaheenna Itoobiyaanka ahi ay qaban doonaan hawl wanaagsan iyaga oo daryeel caafimaad mustaqbalka siinaya haweenka gobolka Soomaalida. Waxaan rajeynayaa in xaruntan caafimaadka la ballaariyo oo la gaarsiiyo kuwo badan oo kale oo ku nool gobolka oo aan heli karin daryeelkan oo kale. Haween badan ayaa baahiyahooda caafimaad aan weli la daboolin waxaana jira ururo aad u tiro yar oo bixiya gargaar”.
Mashrruca MSF ee Gobolka Wardheer
MSF waxa Wardheer, oo ka tirsan Gobolka Soomaalida ee Itoobiya, ay ka shaqeyneysey ilaa 2007dii. Ururku waxa uu tas-hiilaadka Xafiiska Caafimaadka ee Dowladda ka taageeraa bixinta daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta qaaxada iyo hawlaha shaybaarka. Meelo kale oo gobolka ka mid ah ayaa MSF waxa ay daryeel caafimaad (ka bilowda daryeelka caafimaadka aasaasiga ah ilaa daryeelka nafaqeynta) ku bixiyaa Galaaddi, Bookh, Bariga iyo Galbeedka Iimey, Dhagaxbuur, iyo Doolow Addo (xerada qaxootigu ku sii hakadaan iyo degaannada ku hareereysan).
Mashrruca MSF ee Wadanka Itoobiya
Dalka Itoobiya, MSF waxa ay sidoo kale ka barnaamij daweeya cudurka kala azar (sidoo kale daaweynta HIV/qaaxada/nafaqo-xumada) ka ka waddaa Abdurafi, waqooyi-galbeed ee gobolka Amxaarada; mashruuc daryeelka caafimaadka aasaasiga ah ayaa ay ka waddaa Wantaho woreda oo ka tirsan gobolka Gambella; waxaana ay taageertaa barnaamijka qaranka ee baahinta istiraatiijiyada nafaqeyn ku daweynta bukaan-socodka ee Anchar worreda ee Galbeedka zoonka Hararge ee gobolka Oromada. Intaa waxaa dheer, in ururku uu diyaar u yahay in uu wax ka qabto xaaladaha degdegga ah haddii iyo goorta ay lagamamaarmaan noqoto.
Tags: daryeelka hooyooyinka, Itoobiya, wardheer